Amathiphu onokwenza amashelofu okugeza ngamandla akho
Isiko lasendulo sokugeza embhedeni waseRussia nge-broom enamandla, i-kvass nemifino iphinde ithandwe nabalandeli bokuphila okunempilo. Labo abafuna ukuba nekamelo labo le-steam liba njalo. Lapha sikhule namakhowe, izindawo zokugezela ezweni kanye nasezindaweni zasemadolobheni. Emndenini ngamunye, ukugeza kweRussia kuhlelwe ngendlela yayo, kodwa esigabeni sokugcina, umbuzo ofanayo uphakama: "Indlela yokwenza amashalofu okugeza?"
Esigumbini se-steam yaseRussia, umcimbi oyinhloko uyazihlambalaza ngomshanelo emgqonyeni. Ngenxa yalokho, umklamo wayo kufanele uvumele umshayeli ukuba afike emzimbeni womuntu okhuphuka ngokukhululekile futhi athathe isikhundla esifanele salolu hlelo. Kumele kuthathwe njenge-axiom: uma ukwakhiwa amashalofu okugeza ngamandla akho, okokuqala kudingeka uzinakekele kalula, futhi kuphela mayelana nokuklama nobuhle, nakuba umuntu engaphazamisani.
Amapaki ngokuvamile amancane amancane, ngoba amancane amancane (ngaphakathi kwemingcele elinganiselwe), ngokushesha, kulula futhi kunokwengeziwe ukonga ukufudumala ekushiseni okulungile. I-geometry yamapulangwe yesikhala esinomkhawulo kufanele ibe lula kakhulu.
Abafundisi ababelethwe ukwakha amashalofu ukugeza ngezandla zabo, umcabango uvame ukutshela uhlobo lwesiteji ezinyathelo eziningana ezibanzi. Njengoba uyazi, phezulu kwe-steam kuyashisa kunanoma yisiphi isakhiwo. I-multistage ivumela abalandeli ukuba "bapake epaki" ukuze bazikhethele izinga ngezinga elifanele lokushisa. Ngakho-ke, ukuhlela amashalofu okugeza ngezandla zabo, kunengqondo ukunamathela ekuhlelweni kwendabuko.
Ukuhlelwa kwamashalofufolthi kukhethwe ngokuya kwesakhiwo samakamelo esithambile kanye nomcabango wakho. Zingafakwa eduze kodonga olulodwa noma ezimbili, ngendlela yombhalo othi "G", njll. Abanikazi bamakamelo amasha okushayela amafasitela anqume ukwenza amashalofu afanele ukugeza ngezandla zabo siqu kuzodingeka bazibophezele ekubekeni ezindongeni zezithulu.
Kunconywe ubukhulu beShelf
Ekuphakameni kwegumbi le-steam elingaphezu kuka-2.2 m, kunokwenzeka kakhulu ukukwenza ngamashalofu emazingeni amabili. Kodwa uma ukuphakama kwegumbi kuvumela, kuhle ukufaka isigaba sesithathu. Kulesi simo, ibanga eliphakathi kwamashalofu lithathwa ngokuthi lingama-45-50 cm, kanti uphawu oluphezulu luyi-1.2 m ngaphansi kwesidumbu.
Ngezinye izikhathi ukuhlinzekwa kwe-steamer ibhentshi eliphansi linikezwa, elitholakala ngaphansi kwezinga lokuqala futhi likhishwa uma kudingeka.
Ububanzi bamashalofufrifu kufanele bukhululekile kumuntu oqamba amanga noma ohlala phansi. Ezingezansi, ezihloswe ukuhlala, zenza ububanzi obungama-40-50 cm. Isinyathelo esingenhla ngokuvamile senza indima yombhede, ngakho-ke kungcono ukuyenza ibe yanele ngokwanele - kusuka ku-65 kuya ku-90 cm.
• Amashalofu kufanele akhiwe ngendlela yokubeka phansi evela emabhokisini aphansi, phakathi kokushiya ukukhipha amanzi okungenani u-1 cm. Ikhonteli linamathele kuhlaka noma libekelwe ezisekelweni ezinjengezicupho. I-easy deck yokudoba ukuthi ingasuswa futhi yome ngaphandle kwezindonga zokugeza.
• Phakathi kwamashalofu kanye namadonga egumbini lomusi, shiya igebe (10 cm) ukuze uthole umoya wokuphumula.
• Ubukhulu obuphakanyisiwe befreyimu buyi-70x50 mm. Ubuningi bamapulangwe we-flooring kufanele bube ngaphansi kwebubanzi izikhathi ezine, lokhu kuzoqinisekisa ukumile ngokugcwele kwezinkuni.
• Inani lezinsizakalo lixhomeke ekubunjeni kwamabhodi: okuncane kakhulu, lapho kudingeka khona, kepha okuncane kakhulu kumile ngokushesha.
• Ukuze ifreyimu isekele, kuphakanyiswa ukuba wenze iplanki lonke ubude bhodi kusukela kokubili nangaphezulu. Lokhu kuzohlinzeka ukuqina okungaphezulu kwesakhiwo.
• Ukuqinisekisa ukuzinza, futhi nokuvikela emanzini okuphansi, ama-gaskets enjoloba anamathele emiphakathini yokusekela. Abanye abadwebi basebenzisa i-hockey pucks ukuhlukanisa amashalofu okugeza. Intengo yabo iphansi, futhi kulula nokulula kwesinqumo esinjalo akungabazeki.
Inkosi ngayinye, eqala ukwakhiwa, iqala ngokubala izindleko ezilinganisiwe zento. Ukulinganisa ukuthi ukwakhiwa kwezindonga kuzodingeka kangakanani, udinga ukwazi usayizi nenani lento okuzokwenziwa kuyo. Ngokwenzayo, ngisho, kubonakala sengathi, izibalo ezinembile zilinganiselwa, ngoba akukho izindleko ezilodwa zezingxenye. Ngakho-ke, intengo ye-polka-flakes, eyenziwa ngesandla, ngokuyinhloko ixhomeke enhlotsheni yokhuni. Isibonelo, izindleko zephrofayili kusuka ku-abash yase-Afrika - ama-ruble angu-170-190 nge-1 egijima. M. Lumber kusukela emapulini ebhande eliphakathi libiza kakhulu. Ngakho, izindleko zephrofayli emthini we-linden - kusuka kuma-ruble angu-130 wokusebenza oku-1. M. Nokho, esifundeni ngasinye amanani abo amatshe, ngakho-ke i-hardware nezinye izinto.
Ukuze induduzo ebhodini ingahlanganiswa nezinyawo ezinhle kanye nenhloko eyenziwe ngokhuni. Futhi uma konke sekulungele, sekuyisikhathi sokushisa indlu yokugeza, ukuqhuma izithavu, futhi ... Ngomoya olula!
Ibhentshi lediza elenziwe ngamapulangwe ngezandla zakhe: imidwebo. Amabhentshi enziwe ngezandla zawo ezenziwe ngensimbi nangokhuni
Indlela yokwenza umusi ovela ephepheni: incazelo yenqubo
Umtshina wensimbi ojulile ngezandla zabo siqu: umdwebo, imiyalelo kanye nempendulo
Indlela yokuhlanza isitofu ekhaya?
Canary Beach Resort Indawo abantu 3 * (Vietnam, Phan Thiet): incazelo ehhotela, abahambi Izibuyekezo
Silindele isilinganiso okusheshayo nezinye izinkomba we impahla ibe yimali inkampani
Whit ngoMsombuluko - usuku igama Zomhlaba
Kuyinto ukwazi - kungcono iwubuphukuphuku!
Ungadla Tasty ubusika ne irayisi
Yokuvikela ekulimaleni, indlela yokugwema ukuba isisulu ukuloya?
Lavender - ukutshala nokunakekela